Tantara marina: Drop Database? Tsindrio ... Doh! | Martech Zone
Tantara marina: Drop Database? Tsindrio… Doh!
Alarobia, Jolay 9, 2008 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Ity manaraka ity dia tantara iray marina, androany androany tokony ho tamin'ny 11:00 maraina teo am-pivoahana sakafo antoandro. TSY lahatsoratra karama ity, fa nanampy rohy MAFY amin'ny orinasa aho ho fankasitrahana ny fanavotan'izy ireo ny vodiko!
Ny Development 101 dia milaza fa rehefa mikorontana amin'ny kaodinao na ny angon-drakitrao ianao dia manao backup foana aloha. Tsy misy maningana. Ny 15 minitra mety hanaovana azy io dia mety hamonjy anao mandritra ny volana na taona maro iasana.
Androany, tapaka ny fampandrosoana 101.
Nandritra ny famafana ny plugin iray dia hitako fa misy latabatra miaraka aminy mifandraika amin'ilay plugin. Nisafidy haingana ireo latabatra aho ary nanindry Drop.
Mazava ho azy, ny fampitandremana tsy maintsy natao dia nipoitra avy amin'ny tranokalako fa izaho, ilay manan-tsaina, dia efa nanana ny ankihiben'ilay bokotra enter quivering miaraka am-piandrasana. Ny fotoana manaraka dia nitranga tamina fihetsehana miadana… rehefa nanomboka nidina nankany ambany ny ankihibeniko, manakaiky ny bokotra, dia nanomboka nandinika ilay fampitandremana aho.
"Azonao antoka ve fa te handatsaka ny Database mydatabasename ianao?" Tsindrio.
Tsy azoko antoka hoe maninona ny fahaizako mamaky sy ny kognitika no nalehan'ny ankihiben-tànako tamin'ny fametahana ny lakilen'ny fidirana, fa ny tsy azo lavina no nitranga. Nofafako ny database database ahy fotsiny.
Nahatsiaro maloiloy avy hatrany aho ary nisy hatsembohana mangatsiaka tonga teo amin'ny handriko. Nosokafako haingana ny fisoratako FTP ary noteteziko ny mpizara raha misy sisan-tahiry iray mety ho voafafa. Mampalahelo fa tsy manana fitoeram-pako ireo mpizara tranonkala. Hendry izy ireo handinika miaraka aminao alohan'ny hanaovanao zavatra tsy misy dikany.
Amin'ny fomba farany farany, niditra tao amin'ny tontonana fanaraha-maso fampiantranoana aho, nanokatra tapakila fanampiana ary nanoratra izao manaraka izao:
Nofafako fotsiny ny database ahy tao amin'ny mpizara. Azafady mba lazao amiko fa manana karazana fizotran'ny backup ianao amin'ny toerana tokony hamerenanao azy. Asan'ny fiainako io. Sob. Mpimasy Mitaraina.
Ok, tsy tena nitomany sy nitomany ary nitaraina aho - fa miloka ny borikinao ianao fa izany no nataoko fony aho nanoratra ny tapakila. Tao anatin'ny 2 minitra dia nahazo valiny tamin'ny alàlan'ny mailaka aho:
Azonao atao ny miditra amin'ny kaonty mpivarotra anao ary mangataka famerenana amin'ny laoniny ny safidin'ny vokatra. Ny vidin'ny famerenana amin'ny laoniny dia $ 50.
Azo antoka… mankany amin'ny pejin'ny vokatra aho ary ao, amin'ny voninahiny rehetra, no sary masina hangataka famerenana amin'ny laoniny. Ny takelaka tsotra dia manontany ny daty tianao hampiasaina ary koa mampiditra fampahalalana azo ampiharina. Manoratra ny anaran'ny database fotsiny aho ary mangataka azy ireo hamerina izany amin'ny backup farany ananany.
Tao anatin'ny 20 minitra dia nihemotra ny tranokalako minus ny lahatsoratra 2 farany nataoko. Namerina nanangona ireo lahatsoratra ireo avy hatrany tamin'ny mailaka aho (toerana isoratako anarana amin'ny sakafoko) ary miverina 100% ny tranokalako. Tsy azoko koa ny hevitra 1 (azafady Jason!).
Efa ela aho no niaraka tamin'ity mpampiantrano ity. Miaraka aho izao Flywheel ary ny famahanana mandeha ho azy isan-alina dia ampahany amin'ny fanolorany.
Raha nanana fitarainana iray aho dia ny hoe rehefa nakatona ny tapakila dia tsy afaka mifampiresaka amin'izy ireo momba izany ianao. Maniry aho raha afaka manampy hevitra amin'ny tapakila fanohanana mihidy.
Androany dia ho nilaza hoe: "Misaotra!".
Tags: backupstakelaka fikirakiranahamerina amin'ny laoniny ny tahirymitete databasefampiantranoanaindray
Douglas Karr Wednesday, July 9, 2008 Monday, January 1, 2018
Famoronana mifanohitra amin'ny zon'ny mpamorona
Zahao ity Call to Action ity!
9 Jul 2008 amin'ny 9:18 PM
Nandatsaka DB tsy nahy aho fa tsy niniako natao koa 🙂
Soa ihany fa mitazona backup ihany koa ny tranokalanay 🙂
Dreamhost raha ny marina dia nanampy tamin'ny volana lasa teo, mino aho fa ny fahafaha-manavao ireo backups anao irery maimaim-poana, izay mamy tokoa, ary manarona ireo rakitrao aza raha tianao.
Rehefa avy nandatsaka ny DB voalohany tsy nahy aho dia nanomboka nanao izay fantatro fa tokony hataoko tamin'ny voalohany, nanondrana ny DB tamina kopia iray teo an-toerana. Mahagaga fa nampiasaiko ireo rehefa avy nanao zavatra moana ihany koa 🙂
9 Jul 2008 amin'ny 9:22 PM
Tena mahay isika manao zavatra indraindray manao ny zavatra dondrona. Efa teo aho ary nanao an'izany ary hoy i Alex, mbola tsy maintsy nampiasa backup aho indraindray.
Faly fa afaka namerina azy io ianao.
Jul 10, 2008 amin'ny 4: 11 AM
Faly fa afaka tamin'io korontana io ianao! Miresaka momba ny bilaogera rehefa nanova ny url anao ianao, mety ho namono azy io!
Tsy maka vintana amin'izany karazana zavatra izany aho ary mamerina matetika, fa tsy rehefa hanao fanovana fotsiny aho. Mampiasa ny wp-db-backup plugin izay mandefa mailaka amiko backup feno amin'ny database isaky ny alatsinainy, na dia afaka misafidy impiry aza ianao no maniry azy. Hanoro hevitra an'ity ho an'iza na iza aho noho ny olana ilazalazanao etsy ambony ihany, fa koa raha misy ny fanapahana na ny olana hafa mety hamela ny database anao tsy misy ilana azy. Mahafinaritra ny mahay mandoa vola amin'ny famerenan'ny fahalalam-pomba fampiantranoana anao, fa mora kokoa sy mora kokoa kosa ny manana nomaniny ho solon'izay.
Aza atao intsony Doug 😉
Jul 10, 2008 amin'ny 11: 45 AM
Saingy, oh, tena tiako ny miaina eo an-tsisin-dàlana. 🙂